Soo dejisan AOMEI OneKey Recovery 1.6.1 – Vessoft
WindowsNidaamkaSoo celinta iyo soo celintaAOMEI OneKey Recovery
Bogga rasmiga ah: AOMEI OneKey Recovery
AOMEI OneKey Recovery – software ah si ay gurmad iyo soo celinta nidaamka ku qasabno yar. software waxay taageertaa dib u soo kabashada nidaamka kombiyuutarka in goobaha default warshada. AOMEI OneKey Recovery macaamila saarayaasha kala duwan oo ka mid ah kombiyuutarada la qaadi karo iyo soo celin karaa nidaamka haleysan yahay in gurmad ah hore u abuuray adigoo riixaya mid ka mid ah oo muhiim ah inta lagu guda jiro boot nidaamka. software wuxuu kuu ogol yahay in gurmad nidaamka ee hababka si toos ah ama buuga, dooro heerka riixo lagama maarmaan iyada iyo badbaadin in qoqobkii ku haboon ee disk adag. AOMEI OneKey Recovery waa inay awoodaan inay soo celiyaan nidaamka kombiyuutarka adiga oo aan la isticmaalayo a CD khaanada Downlaods, DVD ama USB-sidayaal.
mode gurmad Automatic
Rakibidda heerka riixo gurmad lagama maarmaanka ah
kabashada System in goobaha warshadda
Dhexgalka ee kombiyuutarada shakhsi iyo laptop ka saarayaasha kala duwan
kabashada System oo aan la isticmaalayo warbaahinta Downlaods
Soo dejisan AOMEI OneKey Recovery
Faallo ku saabsan AOMEI OneKey Recovery
AOMEI OneKey Recovery Xirfadaha la xiriira